Fulbaana 11, 2021
Faayilii - Waltajjii Gabaa Addunyaa Niw Yoork keesaa Fulbaana 11, 2001 haleellame
Waggoota 20 dura shororkeessonni xayyaaroota imaltootaa kan Yunaytid Istees 4 butuudhaan magaala Niw Yoork keessatti gamoolee Waaltaa Daldala Addunyaa lama Washiingtan Diisii keessatti gamoo Pentaagoon haleeluun, kutaa Pensilvaaniyaa keessatti xiyyaaricni butan kufuu isaatiin walumaa-galatti namoota 2977 fixan.
Haleellaa kana ka qindeesse hooggnaan Al-qaayidaa Osamaa Bin Laaden tahuu tu battaluma himame. Guyyaan shororkeessonni balaa kana itti dhaqqabsiisan Fulbaana 11 baranaa waggaa 20 guute.
Gama biraan looltonni Ameerikaa fi kanneen biroon shoroorkeessummaatti duuluuf gara Afgaanistaanitti bobba’anii turan waggoota 20 booda biyyattii gad-lakkisanii baanaan, Taalibaan tu taayitaa qabatee bulchaa jira.
Jiraattonni waggaa digdama dura gaafa haleellaan shororkeessotaa magaalaa Niw Yoork keessatti geggeessame sana achi turan maal yaadatu? Namota lama Jaallanneen dubbisne keessaa tokko Obbo Zinaab Abbaa Jabal Niw Yoork keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Komiishinni Mirga Namaa Kan Tokkummaa Mootummootaa fi Kan Itiyoophiyaa Qorannoo Naannoo Tigraay Keessatti Geggeessan Xumuruu Beeksisan
Jala-butii Bara Haaraa Itiyoophiyaatti Gatiin Oomishaalee Baay’ee Dabaluu dubbatu Jiraattonni
Dargaggoonni Haleellaa 9/11 Akkamitti Yaadatan?
Eenyummaan Namoota 9/11 Ajeefamanii Ammallee Addaan Baafamaa Jira